Vadzidzi Voratidzira paMasvingo Polytechnic
Vadzidzi vepachikoro chikuru cheMasvingo Polytechnic neChishanu vaisa mabhuku pasi vachiratidzira mari dzavanopihwa nehurumende dze Zimbabwe Manpower Development Funds, ZIMDEF, idzo dzavari kubatirwa nevakuru vechikoro chavo vachinzi mari iyi ndeyekubhadhara mari yechikoro kuti vadzidze.
Vadzidzi vanga vachisvika zviuru zvina varamba kudzidza vakafamba vakaenda kuhofisi yemukuru wechikoro, Va Evans Musara, vachida mari dzavovachiti varikubhdhariswa mari yechikoro kaviri.
Vazhinji vanyunyuta kuti vakatorerwa mari iyi gore rose rapera apo vakaendeswa kumakambani kunodzidziswa basa.
Mumwe mudzidzi, VaGift Mathews, vanoti vanga vachida kutsanangurirwa zvizere uye vadzorerwe mari dzavo.
"Tiri kubatirwa mari iyi tiri kuma attachements, saka mari dzatinopuwa kuti tiwane kubatsirikana tiri kuma attachment, asi ndidzo dzavanotora, mari dziri kubhadharwa that’s why vamwe vari kuda mari iyi asi vari kungobatirwa," vadaro Mathews.
Vadzidzi ava vanoti kana vari kumakambani kwavanodzidziswa basa vasati vapedza zvidzidzo, vanopuhwa mari inoita zana remadhora mwedzi woga woga asi chikoro kunova kunosvikira mari iyi, inotora makumi masere emadhora dzimwe nguva yose.
Muzvare Miriam Dondofema vanoti chikoro che Masvingo Polytechnic chiri kuvhabhadharisa mari yakawanda vachienzanisa nezvimwe zvikoro munyika.
VaDesmond Martin vanoti mari yavanobhadhara haisi kuenderana nemabatirwo avanoitwa kunyanya pachikafu.
"Tiri kuita challenge yekuti mari tobhadhara yakakwana asi kana takupuwa chaikafu hazvienderani, asi tichibvisa mari, chikafu chacho hachiiti," vadaro VaMartin.
Vadzidzi ava vazoita musangano nevakuru vechikoro avo vavaudza kuti vaisa nyaya yavo kumunyori webazi rezvedzidzo yepamusoro asi varamba kubuda vachiti vanoda mari yavo.
Mukuru wechikoro, VaMusara, vazama kubuda mumusangano uyu asi vana vechikoro vava vharira muhoro inodyirwa vachiti vanoda mari yavo vakatanga kuimba nziyo vachiratidzira.
VaMusara, avo varamba kutaura nevatori venhau, vazobudiswa mushure mekupindira kwemapurisa.
Mari yeZimdef gore rapera yakamboita mutauro mushure mekunge yatorwa zvisiri pamutemo neaimbova gurukota rezvedzidzo yepamusoro, Professor Jonathan Moyo, avo vainzi vakashandisa zvisiri pamutemo mari inopfuura zviuru mazana mana emadhora.
Asi VaMoyo vanoramba nyaya iyi vachiti vakashandisa mari iyi pazvirongwa zveZanu PF uye vachiti zvaiva pamutemo.